Gen Odawaa iyo wafdi uu hoggaaminayo oo gaaray Beledweyne | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Gen Odawaa iyo wafdi uu hoggaaminayo oo gaaray Beledweyne
Gen Odawaa iyo wafdi uu hoggaaminayo oo gaaray Beledweyne
Taliyaha Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Janeraal Odawaa Yuusuf Raage iyo wafdi saraakiil ciidan ah oo uu hoggaaminayo ayaa goordhow oo maanta ah gaaray Magaalada Beledweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan,iyada oo halkaasi siweyn loogu soo dhaweeyay.
Taliyaha waxaa socdaalkiisa ku wehlinaya saraakiil sare oo AMISOM ka tirsan, waxaana soo dhoweyn loogu sameeyay Garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif.
Taliye Odawaa ayaa inta uu ku sugan yahay Baladweyne wuxuu kormeer kala duwan ku sameyn doonaa Xerooyinka Ciidamada Dowladda deegaanadaas, gaar ahaan xarunta Baladweyne,wuxuuna xog-wareysi la yeelan doonaa saraakiisha ciidanka Xoogga dalka ee gobolka Hiiraan la howlgala.
Taliyaha Ciidanka Xoogga dalka Generaal Odawaa Yuusuf Raage ayaa si gaar ah xoogga u saari doono dagaalka ka dhanka ah maleeshiyada Al-Shabaab iyo sidii looga ciribtiri lahaa guud ahaan gobolka Hiiraan.
Maqaal horeGuddiga lagu muransan yahay ee doorashooyinka oo ku baaqay shir deg deg ah
Maqaal XigaIiraan oo diiday in ay wadahadallo la gasho Mareykanka